Xasan Cali Khayre iyo lixdii Ra'iisul Wasaare ee ugu dambeyay iyo sida ay xilka oga tageen
Wednesday July 29, 2020 - 19:31:50 in Wararka by Mogadishu Times
Tobankii sano ee la soo dhaafay, waxaa Soomaaliya soo maray toddobo ra'iisul wasaare iyo seddax madaxweyne. Haddaba waxaan eegeynaa sida ay Ra'iisul Wasaare yaashaas ku yimaadeen iyo sidii ay xilka uga tageen: 1- Cumdar Cabdirashi Cali
Tobankii sano ee la soo dhaafay, waxaa Soomaaliya soo maray toddobo ra'iisul wasaare iyo seddax madaxweyne. Haddaba waxaan eegeynaa sida ay Ra'iisul Wasaare yaashaas ku yimaadeen iyo sidii ay xilka uga tageen: 1- Cumdar Cabdirashi Cali Sharmarke Ka dib markii Sheekh Shariif lagu doortay shirkii Jabuuti ee 2009-kii, wuxuu Bishii February ee isla sannadkii magacaabay Ra'iisul Wasaare Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke, oo ay dalka Jabuuti ku wada sugaayeen. Dadka ka faallooda arrimaha siyaasadda, waxay magacaabistaa ka muujiyeen rajo wayn, iyadoo loo arkayay in dowladdii Kumeelgaarka ahayd ay taageero ka heli karto Soomaalida gudaha dalka kusugan iyo qurba joogta. Wuxuu ahaa qof siyaasadda Soomaaliya aan si wayn galangal ugu lahayn ka hor intii aan xilkaa loo magacaabay, waxayna ahayd xilli dowladda ay dagaal adag kala kulmeysay kooxo muqaawamo ahaa iyo Al-Shabaab oo qeybo badan oo Muqdisho ah haysatay.
Xigashada Sawirka, SONNA Qoraalka sawirka, Khayre wuxuu xilka kala wareegay Cumar Cabdirashiid
Cumar Cabdirashiid wuxuu ahaa ra'iisul wasaarihii ugu horreeyay ee dowladdii Sheekh Shariif Sheekh Axmed
Balse, ka dib markii la is afgaran waayay, waxaa jiray warar ahaa in Sheekh Shariif uu isku deyay in Cumar Cabdirashiid uu ku qanciyo inuu is casilo, si uu ra'iisul Wasaare kale u soo magacaabo.
Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke ayaa ugu dambeyn, dhammaadkii bishii September 2010-kii, iska casilay xilkii Ra'iisul Wsaare ee uu hayay.
Bishii October 14-keedii, sannadki 2010-kii ayaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo loo magacaabay xilka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya, wuxuuna badalay Cumar Cabdirashiid Sharmarke.
Kontonkii maalmood ee ugu horeysay ee xafiiska ra'iisulwasaarah uu ka shaqeynayay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu ku guuleystay bixinta mushaaraadka ciidamda iyo shaqaalaha dowlada.
Khilaafkaas si loo xalliyo, waxaa shir ku casuumay madaxweynaha Uganda, Yuweri Mseveni, kaas oo sababtay in uu xilkii Ra'iisul Wasaaraha iskacasilo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, 19-kii bishii June 2011-kii.
Farmaajo ayaa khudbadii uu xilka uga degayay ku sheegay in uu go'aankaasi u qaatay danta dalka iyo dadka awgeed.
Ka dib waxaa xilka Ra'iisul Wasaaraha loo magacaabay Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo ka mid ahaa golihii wasiirada ee xukuummaddii Farmaajo.
Wasiirkii Qorsheynta iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee Xukuumaddii Farmaajo, Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, ayuu Sheekh Shariif u magacaabay xilkii Ra'iisul Wasaarah, 23-kii June ee 2011, waxayna Baarlamaankii ku meelgaarka ahaa ku ansixiyeen si aqlabiyad ah, 28-dii isla bishaas.
Xigashada Sawirka, Cabdiweli Gaas
Gaas wuxuu ahaa ra'iisul wasaarihii hoggaaminayay xukummaddii dalka ka saartay xilligii Kumeelgaarka ahaa.
Horraantii bishii August ee 2012, wuxuu Cabdiweli Gaas shaaciyay inuu u tartamayo xilka madaxweynaha. Wuxuuna la tartamay madaxweynihii uu ra'iisul wasaaraha u ahaa, Sheekh Shariif.
Maxay tahay sababta dhabta ah ee Khayre uu xilkiisa ku waayay?
Farmaajo iyo Khayre ma aqbali doonaan casuumaadda Dhuusamareeb?
Cabdiweli Gaas ayaa kaalinta labaad ka galay doorashadaas oo uu ku guuleystay Xasan Sheekh Maxamuud. Muddo xileedkaa Ra'iisul Wasaare ee Gaas ayaa dhammaaday 6 October 2012, xilligaas oo ra'iisul wasaarihii cusbaa ee Xasan Sheekh uu magacaabay, Cabdi Faarax Shirdoon (Saacid) uu xilka la wareegay.
Madaxweynihii hore, Xasan Sheekh Maxamuud markii uu maamulka Villa Somalia la wareegay, wuxuu Ra'iisul Wasaare u magacaabay Cabdi Faarax Shirdoon (Saacid).
Baarlamaanka ayaa ugu dambeyn kalsoonida kala laabtay Saacid, 2-dii Bishii December, 2013-kii. Balse Ra'iisul Wasaaraha ayaa sheegay inuu ka niyadjabay baarlamaanka ka dib markii loo diiday "inuu ka hor hadlo".
Cabdiweli Sheekh Axmed, ayaa 12 December 2013-kii, loo magacaabay xilkii Ra'iisul Wasaaraha ee Cabdi Faarax Shirdoon uu banneeyay.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa magacaabay ra'iisul wasaarihii labaad ee dowladdiisa, wuxuuna ka dhigay Cabdiweli Sheekh Axmed oo baarlamaanka ay si aqlabiyad ah ku ansixiyeen 21-kii December 2013-kii.
Balse ku dhowaad sannad ka dib markii xilka uu la wareegay, bilihii October iyo November, 2014-kii, waxaa soo baxay khilaaf u dhexeeyay Ra'iisul Wasaare Cabdiweli Sheekh Axmed iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.
Khilaafkaas wuxuu markale ka dhashay isku shaandheyn uu ra'iisul wasaaraha doonayay in uu ku sameeyay golihii wasiirada, waxaana lagu eedeeyay in uusan madaxweynaha la tashan.
Ka dib waxaa soo baxay wasiirro ka tirsanaa xukuummaddii Cabdiweli Sheekh Axmed oo Ra'iisul Wasaaraha ka dalbaday inuu iska casilo xilka isagoo dhowraya danaha dalka.
Farmaajo oo khayre ku taageeray inaan doorashada dib loo dhigin
Sidii ay u dhacday xil ka qaadistii Khayre
Horraantii bishii December ee 2014-kii, ayey baarlamaanka u qaadeen codka kalsooni kala noqosho oo ka dhan ahaa Ra'iisul Wasaaraha. 153 xildhibaan ayaa u codeynsay arrintaas, 80-na way diiday. Taasna waxay soo afjartay xilligii shaqo ee Cabdiweli Sheekh Axmed ee xukuumadda.
17-kii isla bishaas ee 2014, Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu xilka Ra'iisul Wasaaraha u magacaabay Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo dowladdii Sheekh Shariif na ka soo noqday Ra'iisul Wasaare.
Wuxuu ahaa ra'iisul wasaaraha keli ah ee mar labaad xilka ku soo noqday. Wuxuu markii labaad xilka kala wareegay Cabdiweli Sheekh Axmed oo mooshin xilka looga qaaday.
Cumar Cabdirashiid waa ra'iisul wasaaraha keli ah ee laba goor xilka ku soo noqday, doorashadii Farmaajo ka dib ayuuna xilka wareejiyay
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa 23-kii February xilka Ra'iisul Wasaaraha u magacaabay Xasan Cali Khayre. Waxay ahayd maalin ka dib markii xilka madaxweynaha loo dhaariyay.
Xasan Cali Khayre, waa ra'iisul Wasaarihii ugu waqtiga dheeraa
Khayre wuxuu ahaa ra'iisul wasaarihii ugu waqtiga dheeraa ee Soomaaliya soo samara 20-kii sano ee la soo dhaafay.
Balse Xasan Cali Khayre oo sharci darro ku tilmaamay hannaankii loo maray codeynta ayaa sheegay inuu si iskiis ah xilka isaga casilay, "isagoo u turaya dalka".
Axmed Xaaji Xasan